मस्कोका ती दिन
गोरखापत्र अनलाइन माघ ८, २०७८ शनिबार
सन् १९६९ सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर म र प्रदीप आचार्य (लामो समयसम्म सिहंदरबार पुनर्निर्माण आयोजनाका प्रमुख, हालः दिवङ्गत) मस्कोको पढाइ सिध्याइ तासकन्द, कराँची, ढाका हुँदै हवाईजहाजबाट काठमाडौँ फक्र्यौं । मस्कोबाट घण्टौँ लगाएर तासकन्द पुगेपछि त्यहाँ दुई घण्टाको विश्रामपछि राति कराँची आयौँ । कराँचीमा राति होटलमा बसी दिउँसो २ बजेको उडानबाट ढाका जानु थियो । तसर्थ हामीले आफ्ना सामान सबै झिक्यौँ । एउटा सुरक्षा अधिकारी आएर...
बौद्धमतलाई चिनाउने पुस्तक
केदार वाशिष्ठ माघ ८, २०७८ शनिबार
बुद्धबारे लेखिएका सामग्री ज्यादै धेरै छन् । विभिन्न भाषा र विधामा बुद्धको प्रचार प्रसार पाइन्छ । त्यसरी आउने सामग्रीमा बुद्धको जीवन, बुद्धको समय, बुद्धको विचार, बुद्धका अनुचर वा अनुयायी आदि विषयवस्तु समेटिएका हुन्छन् । तिनलाई बौद्ध धर्म वा दर्शनका रूपमा पनि अथ्र्याइने पाइन्छ । बुद्ध आफँैमा एक व्यक्ति होइनन्, विभिन्न नामका बुद्धको इतिहास बौद्धमार्गमा रहेको पाइन्छ । तीमध्येका एक सिद्धार्थ गौतम वा गौतम बुद्ध हुन्...
नेपाली कलामा आधुनिकता
नेपालमा आधुनिक कला भन्नाले सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न नसक्ने कला भन्ने बुझाइ छ । नेपाली जनमानसका निम्ति आधुनिक कला अभैm पनि नौलो छ । यसलाई बुझ्न र स्वतःस्फूर्त आत्मसात् गर्न यसको ज्ञान, जानकारी वा अध्ययनको खा“चो पर्छ । कला इतिहासको सङ्क्षिप्त मात्र भए पनि जानकारी लिन सके केही हदसम्म नेपालमा अहिले चलेको आधुनिक कला बुझ्न सकिन्छ । त्यसो भए आधुनिक कला कसरी बुझ्ने त ? कला बुझ्ने मेसोलाई सर्वप्रथम विश्वकलाको परिवेशबाटै हेर्न...
तन्मयतासाथ चिया पिउँदा
दुःस्वप्नसँग लड्दालड्दै रात छर्लङ्ग बित्यो । संयोग नै भनुँ, त्यो योग दिवसभन्दा एक दिनअघिको रात थियो । कहिलेकाहीँ सोच्छु, दुःस्वप्नले किन यति धेरै विचलित पार्छन्, मजस्ता नश्वर चोलालाई ? यो दुःख–सुखको चक्र अनवरत छ, आफ्नो भागमा शायद अलि धेरै दुःख पो छ कि त ? तर जीवन दुरुह छ भन्दैमा विचलित हुने उमेर गएन र भन्या ? कति व्यथित भइरहने ? निको नहुने गरी कति पुरानै घाउ कोट्याइरहने ? आफँैलाई सोध्छु । सम्झाउन खोज्छु– जीवन भ्रम हो, यो...
सूर्यप्रसाद पाण्डे माघ ८, २०७८ शनिबार
आजभोलिको शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यालय/कलेज सञ्चालकका चिन्ता एउटै छ, छोराछोरीले पढाइमा ध्यान दिएनन्, कक्षामा गएर फिटिक्कै पढ्दैनन्, दुःखजिलो गरेर पढे पनि रोजगारी पाइँदैन वा पाइयो भने पढाइ एकातिर, रोजगारी अर्कैतिर हुन्छ । अझ कोरोनाका कारण करिब करिब सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा पढ्ने, पढाउने र रोजगारीसम्बन्धी सबै काम निकै चुनौतीपूर्ण बनिसकेको छ । हरेक उमेर समूहका नागरिकका फरक फरक व्यथा छन्,...